sonata-cantata August 16, 2012 at 11:32 PM
online နဲ့ ပုံနှိပ် လား? သယ်ရင်း
တို့များက ဝေလေလေ ထဲက ပါမယ်း)
YeTun Photography August 16, 2012 at 11:35 PM
ကြိုက်တယ်.. ကာရန် ပါတယ် စာသားတွေကျစ်လစ်တယ်၊ ရိုးရှင်းတယ်၊ တွေးရတယ်။
Nyi Linn Thit August 16, 2012 at 11:59 PM
အုံလိုက်ကျင်းလိုက် အရွေ့၊ ဆူညံမှုနဲ့ တိတ်ဆိတ်မှု တလှည့်စီ၊ စုစည်းမှု၊ ကျဲပြန့်မှု၊ အစီအစဉ်တကျ ရှိမှု၊ ပရမ်းပတာဖြစ်မှု၊ ...၊ ဒါတွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ခံစားရတယ်၊
အရမ်းသဘောကျတယ် မသက်ဝေ..၊ လက်မနှစ်ချောင်းလုံး ထောင်ခဲ့တယ်...။
sosegado August 17, 2012 at 8:59 AM
ဇာတ်မှာ အခန်းတွေက အနိမ့်အမြင့်ရှိတယ်၊ ကောင်းခန်းပြီးရင်…………………
mstint August 17, 2012 at 11:12 AM
တက်ညီလက်ညီ တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်လေး ပီပီပြင်ပြင်လေး အဆုံးသတ်သွားပါတယ် မသက်ရေ။
pandora August 17, 2012 at 1:03 PM
လှပအားကောင်းတဲ့ကဗျာလေးပါ။ ဒီဘက်မှာ ကြိုးညှိခြင်းကဗျာစာအုပ်လေး ထုတ်ဖြစ်ချိန်မှာ ဆိုတော့ ဒီကဗျာလေးနဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေတယ်။ ကဗျာထဲမှာလည်း ကြိုးတွေပါတယ်မဟုတ်လား။ အမှတ်တရပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကြိုးညှိခြင်း ထဲမှာတော့ အမှားထောက်ခြင်းတွေ အသာနှက်ခြင်းတွေ မာယာတွေ သာတာနာတာတွေ မပါဘဲ ဆရာမတွေအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကြည်နူးစရာအချိန်လေးတွေ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တာ ဝမ်းသာမိတယ်။
ShwunMi- August 17, 2012 at 1:50 PM
လာ ထိုင် ကြည့် ..
လာအားပေးပါတယ်.. မသက်ဝေ ..
Anonymous August 18, 2012 at 12:57 AM
ပြိုင်တူကတဲ့ပွဲလေး သေချာပေါက် ကောင်းခန်းကို ရောက်နေပါပြီ...။ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့...
Ko Kyaw Oo August 15, 2015 at 2:34 PM
ဒီနေ ရာကို
မ ကြာခ ဏရောက်ပေ မ ယ့်
ဒီ စာစု ကို ဘာလို့ မ ဖ တ် ခဲ့ ရ တာလဲတွေးမ ရ ဘူး
မို က် တ ယ်
အ ရ မ်းမို က် တ ယ်